Mapepanhau anofanirwa kufunga ... | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 5, 2006 Chipiri, Gunyana 5, 2006 Douglas Karr
Kubva kuna Seth Blog nhasi maererano ne chinyorwa mune Mupepeti uye Muparidzi nezvemaonero aGodin kubva Diki ndiro Nyowani Huru uye mashandisiro ainoita kuIndasitiri Yemapepanhau.
Mazhinji makambani ari kutsvaga kuzvisimudzira pachawo achaita ongororo yeSWOT vachizvienzanisa nemakwikwi avo. Dambudziko nderekuti 'vemo' vezvenhau vakaita basa rakakura rekuregeredza Internet sekutyisidzira kwenguva yakareba. Izvo zvakange zvisati zvaitika kusvikira Mapepanhau atambidza Classified mari kuCraig's Chinyorwa uye eBay kuti vazive kuti ichi Interweb chinhu chaivepo kugara. Asi ivo vachiri kufanira kuchinjisa mhasuru dzematunhu avo uye kutora mukana wezvavanenge vari.
SWOT = (S) trengths, (W) eaknesses, (O) mikana, (T) kutyisidzira
Pane zvinhu zvitatu zvakakosha izvo pepanhau rine pamusoro pemakwikwi eInternet: kufukidzwa kwenzvimbo, kugoverwa kwenzvimbo uye zviwanikwa zvemuno. Iwe unoona chimwe chinhu chakafanana ipapo? Yemunharaunda, yemuno, yemuno !!! Izvi zvinhu zvitatu zvinofanirwa kushandurwa kuita zvemakwikwi husiku! Ndakapedza makore anodarika gumi muindasitiri yemapepanhau ndichishevedzera kubva pamusoro pemapapu angu kuti taida kushandisa masimba edu kushandisa mikana yekuve vemuno. Yakanga iri panzeve dzisinganzwi.
Nyaya yakakosha ndeyekuti indasitiri yemapepanhau indasitiri yeukama. Vatungamiriri vayo vakadzidziswa mukati meindasitiri uye haiwanzosiya indasitiri iyi tarenda Indasitiri yeInternet, kune rumwe rutivi, yakaunganidza tarenda kubva kumaindasitiri mazhinji - kusanganisira Mapepanhau (moi).
Handina chokwadi chekuti kiyi ndeyekuti mapepanhau anofanirwa kufunga zvidiki, ini ndinotenda zvechokwadi kuti vanongoda kutora mukana wekusiyana kwavanenge vari sebhizimusi renharaunda. Zvakare, ndinofunga inguva yakakwira yekuti vatange kutarisa kunze kwemadziro avo mana kudhonza netarenda. Ivo vanhu vanga varipo kwehupenyu hwese havasi kuvaitira zvakanaka kwazvo.
Iyo yakanaka ipfungwa - shanduko inogara ichidenhwa!